Kutumira Tepi, Double Sided Adhesive Tape, Kraft Pepa Tepi - Newera
Isu tiri nyanzvi tepi inogadzira munzvimbo yekunze kune 30years ruzivo.
Kaviri-Akatsigira Tepi Series
Multicolor multifunctional machira-akavakirwa tepi
Kudzivirirwa kwezvakatipoteredza uye inoshanda Kraft pa ...
Jumbo rwakapetwa akateedzana
tatamuka firimu nhevedzano
kraft tepi akateedzana
yambiro tepi nhevedzano
simbi foil tepi
Hot nyungudutsa guruu dzakatevedzana
Shanghai Newera Viscid Zvigadzirwa Co, Ltd yakavambwa muna 1990 muShanghai, China. Sezvo mutengesi wegoridhe anogadzira tepi yekunamatira kwemakore makumi matatu ekunze ruzivo,
Hot kutengesa zvigadzirwa
kurongedza tepi, mbiri-mativi tepi, Nano mashiripiti tepi, furo tepi, kraft tepi, masking tepi, fiberglass tepi, mhangura foil tepi, Insulation tepi, yambiro tepi yambiro, dhayipu tepi, yakatambanudza Kuputira firimu, kupenda masking fim, inopisa inyauka glue matanda. , nezvimwewo
1) 20 akasiyana emidziyo, iyo yezuva nezuva inoburitsa inogona kusvika 100,000 mativi emamirimita. kusanganisira 14 akateedzana zvigadzirwa, anopfuura zana apedza zvigadzirwa uye anopfuura makumi matatu semi-apedza jumbo mipumburu. 2) Certification: ROHS, CE, UL, SGS, ISO9001, SVIRA. 3) Ipai OEM yakagadziriswa sevhisi.
Aug-03-2020 Wakambodzidza Here NezveButyl Tape?
Aug-03-2020 COVID 19 KUDZORA KWENYAYA HOT MELT ADHESIVE (HMA) MARKET 2020 TENDA YEMAHARA, DZINOGADZIRIRA, VATambi VAKAKOSHA NEZVINOFANIRA KU2025
Aug-03-2020 HOT MELT GUOKO ZVINOGONESESA MARKET CHIDZIDZO & AWOT KUSVIRA KWA2025: KUSVIRA VADZIDZI 3M, KENYON GROUP, INFINITY BOND
Shanghai Newera Viscid Zvigadzirwa Co, Ltd yakavambwa muna 1990 muShanghai, China. Segoridhe mugadziri mutengesi anoita inonamira tepi kugadzirwa uye kutengesa kwemakore makumi matatu. Yakashongedzerwa nemalabhoritari ehunyanzvi kuve nechokwadi chekuti zvese mbishi zvigadzirwa uye zvigadzirwa zvakapedzwa zvinosangana nematanho uye zvinopa yakasimba yakasimba mhando vimbiso kune epamba uye evatorwa vatengi.